C/raxmaan C/Shakuur oo ka hadlay RW cusub ee Soomaaliya loo Magacaabay | Somalia News
QM oo war cusub kasoo saartay doorashooyinka Soomaaliya
Muqdisho (Caasimada Online) – Xafiiska QM ee Soomaaliya ee UNSOM ayaa mar kale maanta baaq kasoo saaray doorashooyinka la filayo inay dhowaan ka dhacaan Soomaaliya. War-saxaafadeed kasoo baxay UNSOM ayaa ku baaqay in la xaqiijiyo in saaxadda siyaasadeed ee dalka ay ahaato mid furan, oo oggolaanaysa in la muujiyo codadka iyo aragtiyada kala duwan taasoo qayb ka ah geeddi-socodka dimuqraadiyadda. Si taas loo gaaro, waa in la ilaaliyo xorriyadda hadalka, ra’yiga, iyo isu imaatinka/ururka. “Saaxad siyaasadeed oo firfircoon waa midda ogolaanaysa isla markaana dhiirigelinaya ka qaybgalka dhammaan qaybaha bulshada – shaqsiyaadka muwaadiniinta ah, warbaahinta, bulshada rayidka ah, hay’adaha dowliga ah, iyo xisbiyada siyaasadeed, iyo kuwa kaleba. Bulsho dimuqraadi ah waa inay ogolaato in si furan loo muujiyo aragtiyada kala duwan ee arrimaha siyaasadda, iyadoo xor ka ah xayiraad ama dhibaateyn,” ayuu yiri Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, James Swan. “Soomaaliya waxay horumar ka sameysay dib-u-habeynta maamulka dowladnimada sannadihii la soo dhaafay, haddana waa lama huraan in la sii ballaariyo saaxada siyaasadeed iyadoo dalku u diyaar garoobayo doorashooyin. Waxay si gaar ah muhiim u tahay in la maqlo codadka kooxaha taariikh ahaan la haybsooco,” ayuu raaciyay Swan. Waxa uu sheegay in dimuqraadiyaddu ay ka wayn tahay qabashada doorashooyinka, ayna ka dhigan tahay xaqiijinta in saaxadda siyaasadeed ee dalka ay oggolaanayso in dhammaan dadka ay ka qaybgalaan nolosha guud/dowladda. “Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxay garowsan tahay in xorriyatul qowlka, fikirka, iyo isu imaatinku ay yihiin qiyamta udub dhexaadka u ah dimoqraadiyadda ee lagu xeeriyay Baaqa Caalamiga ah ee Xuquuqda Aadanaha iyo Dastuurka Ku Meelgaarka Soomaaliya,” ayuu yiri. “Qaramada Midoobay waxay diyaar u tahay inay la shaqeyso Mas’uuliyiinta/hay’adaha iyo bulshada rayidka Soomaaliyeed si loo ilaaliyo loona ballaariyo saaxadda siyaasadda ee Soomaaliya.”
Hogaamiyaha Xisbiga Wadajir C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa soo dhoweeyey RW cusub ee xalay madaxweyne Farmaajo uu magacaabay Maxamed Xuseen Rooble.
Qoraal uu baraha bulshada ku daabacay C/raxmaan C/Shakuur ayuu ku sheegay in RW cusub uu yahay nin uu si weyn u garanayo wuxuuna xusay inuu ku soo aaday xili adag oo kala guur ah, isagoo talooyin muhiim ahna u soo jeediyey.
HOOS KA AKHRISO QORAALKA C/RAXMAAN C/SHAKUUR OO DHAMEYSTIRAN
Inkastoo xil qaran lagu magacaabay, haddana waxaad meteshaa dad miisaankoodii siyaasadeed maqanyahay iyo deegaan dhibaateysan, taasina waxay kaaga baahantahay in aad muuqaal Raysalwasaare iyo mataalad siyaasadeed yeelato, kana feejignaato in aad asxaabtaada iyo dadkaada ka cararto, si aadan beri cidla u soo dhicin.
Previous articleIn Sweden, traces of treatment against Covid-19
Next articleConsequences of underfunding in 2020 – World – ReliefWeb
Koox Ingiriiska Ah Oo Si Dhab Ah Ugu Biirtay Baacsiga Loogu Jiro Saxiixa Lautaro Martinez
Man United ayaa lagu waramayaa in ay si dhab ah uga fikirayaan in ay toos ugu biiraan loolanka loogu jiro weeraryahanka Inter Milan ee Lautaro Martinez waxa ayna doonayaan xagaaga Laacibkaas waxaa xagaagii si weyn loola xariiriyay Barcelona balse kooxdaas Catalan waa ku fashilmeen in Inter hishiis la gaaraan xilli laacibka shaqsiyan uu doonayay in saxiixaas uu dhaco. Chelsea ayaa iyana ah kooxda labaad ee Ingiriiska ee ka fikireysa saxiixa Lautaro Martinez xilli lagu waramay in xagaagii dalab hoose oo ay ka geeyeen balse wiilka reer Argentina uu diiday sheekadaas Laacibkaas oo xilli ciyaareedkaan dhaliyay illaa haatan sedex gool oo horyaalka Talyaaniga ah , mar kale magaciisa waxa uu mashquulinayaa suuqa xagaaga hadiba aysan dhicin January . Lama helin qiimaha United ku doonayaan saxiixiia Lautaro Martinez balse si dhab ah ayay ugu fikarayaan xilli ay la xariireen wakiilkiisa .
Updated on October 23, 2020 12:09 pm